ကိုရိုနာ အတွက် ယတြာ ကိုအားကိုးနေရတဲ့ ဒေသခံတွေ
2 เม.ย. 2563 - 17:36 น.
ဆားနဲ့ပျားရည်ကို ခြံဝင်ပေါက်မှာ ချထားနေသူ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့သူ ၁၆ဦးရှိပြီလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် လူနာ အမှတ် ၅ အမျိုးသားတဦးလည်း မတ် ၃၁ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ကွယ်လွန် သွားတယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့သူ တနေ့တခြား တိုးလာတဲ့အပေါ် နိုင်ငံသားတွေ အကြား စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
" လိုအပ် ပါက အချို့နေရာတွေမှာ အသွားအလာကန့်သတ်မယ့် အစီအစဉ်communitty Quaratine ကဲ့သို့ ကန့်သတ်မှုမျိုးကို ဆောင်ရွက်ကောင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်" နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒီရောဂါကို ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လူစုလူဝေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းအောင် အစိုးရက ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ ဘုရားပွဲတွေကို ပိတ်သိမ်းတာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားက ပြန်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှာ အကြောင်းကြားဖို့နဲ့ သတ်မှတ်နေရာမှာ ၁၄ ရက် စောင့်ကြည့်ခံဖိုဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်း ကလူတွေ ကတော့ တမာရွက်ပြုတ်သောက်ကြ တယ်ဆိုပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်နေရာအချို့မှာ တော့ သူတို့ဒေသ က ယတြာကို အားကိုးပြီး ကာကွယ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် ၅ ရက်တကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ဈေးတွေကို ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုလည်း ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံရတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန် တဦး သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အလာများတဲ့ အင်းလေးကို သွားရောက်ရတဲ့ ညောင်ရွှေမြို့ဝင် မြို့ထွက်မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာသူတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ တည်းခိုခန်းတွေလည်း လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ပိတ်ထားတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တွေမှာရှိတဲ့ တချို့ စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုရင် ဆိုင်မှာ စားသောက်ခွင့်မပြုဘဲ ပါဆယ်နဲ့သာ ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆွဲထားသလို တချို့ဆေးဆိုင်ဆိုရင် လူကို အဝင်မခံဘဲ အပြင်ကနေ လိုအပ်တာကို ပြောပြီး ရောင်းချပေးနေတာတွေကို အခုရက်ပိုင်း ပို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
တချို့မြို့တွေမှာဆိုရင် စေတနာရှင်တွေနဲ့ လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ဖြန့်ဝေတာ၊ လူအသွားအလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ လက်ဆေးဖို့ အတွက် ဆေးရည်နဲ့ လက်ဆေးဖို့နေရာတွေ စီစဉ် ထားပေးတာတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီရောဂါ ကူးစက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူထု အကြား ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးတာ တွေကို အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူထု အခြေပြု အဖွဲ့တွေ ကလည်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူမှုကွန်ရက်တွေ အစိုးရသတင်းစာတွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေက ကိုဗစ်၁၉ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ဒါတွေကို လက်လှမ်းမီတဲ့ လူတွေအကြား ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေ ရရှိနေပါတယ်။
ဒါ့ပေမယ့် အင်တာနက်၊ စာနယ်ဇင်းတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျေးလက်တောရွာတွေက လူတွေကရော ကိုဗစ်၁၉ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သဘောပေါက်နားလည် ကြပါသလဲ။
ကျေးလက်တွေမှာ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးအသိပညာ ဘယ်လိုရှိလဲ။
ရှမ်းပြည်နယ် မြို့တော် တောင်ကြီးကနေ ၇ မိုင်အကွာ ဖာမွိုန်းကျေးရွာ အုပ်စုထဲက ဒုံခါရာရွာက ရွာသားတွေကတော့ ရောဂါ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားပေမယ့် ဒီရောဂါက ဘာလဲဆိုတာ သေသေချာချာ မသိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
တခြားသူတွေ ကြောက်တယ်ဆိုလို့သာ လိုက်ကြောက်နေပေမယ့် ဒီရောဂါ ဘယ်လို ကူးတတ်တယ်၊ ရောဂါရဲ့သဘောသဘာဝက ဘာလဲဆိုတာ မသိဘူးလို့ ရွာသားအများစုက ပြောပါတယ်။
ဒီအထဲက ရွာသား ဦးဟိုးက “ကိုနာဗိုင်းရပ်လို့ပြောတာပဲ၊ ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီရွာက အိမ်ခြေ ၁၃၀နီးပါး ရှိပြီး ခန့်မှန်း လူဦးရေ ၅၀ဝနီးပါး နေထိုင်နေတဲ့ ရွာဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေက စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၊ သဲတူး၊ အားလပ်ချိန်မှာ နေ့စားလိုက် စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါတယ်။
ကျန်မာရေးအတွက် အနီးနားက ဖာမွိုန်းကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းကို ရွာကလူတွေက မှီခိုနေရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တခြားသူတွေက လက်ဆေးဖို့ ပြောလာလို့ ရွာသားတွေ အနေနဲ့ လက်တွေ ပိုဆေးလာကြတာကို သတိထားမိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနီးနားက ဖာမွိုန်းကျေးရွာက ကျောင်းမှာ ထိုင်းကပြန်လာတဲ့ လူ ၃၀ကျော်ကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေပါတယ်။
သင်္ကြန်တွင်း ဘုရားသွားကျောင်းတက် လုပ်ပါက အရင်ကလို လူစုလူဝေးနဲ့ မသွားဖို့ ပအိုဝ့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ညွှန်ကြားလာတာတွေက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တခုခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိသာစေတဲ့ အရာတခုလို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွာမှာ အသိပညာပေးဟောပြောတာတွေ မရှိဘဲ တဆင့် စကား တဆင့်နားနဲ့ ကြားသိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့ကနေ ဒုံခါရာ ရွာမှာလာဖွင့်ထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင် ပိုင်ရှင် ဂေါ်ရခါး အမျိုးသမီးက “သားကို ဒီရက်ပိုင်း ဝပ်ရှော့မပို့တော့ဘူး၊ ကြားရတဲ့သတင်းတွေကြောင့် မသွား ခိုင်းတော့တာ။ သူတို့နေရာက လူစုံတယ်လေ” လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နေလဲ။
ဆားနဲ့ ပန်းပေါင်းစုံ ပျားရည် ဆတူ ရောပြီး ခြံဝင်ပေါက် မြုပ်ထားရင် မကောင်း ဆိုးဝါးတွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ရွာသားတဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်က ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒီအတွက် သူ့နေထိုင်တဲ့ နေအိမ်အဝင်မှာ ရက်ကောင်းရက်မြတ် ရွေးပြီး မြုပ်ထားတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီနည်းက သူတို့ ယုံကြည်ရတဲ့သူဆီက ရတာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့ သူက မပြောပါဘူး။
ဒါ့အပြင် တချို့က နဖူးကနေ နားခေါင်းထိပ်အထိ ထုံးတို့ပြီး ယတြရာ လုပ်ကြပေမယ့် ဒီနည်းကိုတော့ သူမလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ ဦးကျော်က ပြောပါတယ်။
အရင် ရက်ပိုင်းကလည်း ဂူတွင်းမှာ တရားကျင့်ကြံ့နေတဲ့ မိုင်းဘုန်းဆရာတော်က သံပရာသီး ၅ လုံး၊ ဇီးသီး ၅ လုံး ဘုရားမှာ လှူရင် ဒီရောဂါကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလတွေလည်း ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါသေးတယ်။
“သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွားပေါ့ဗျာ၊ ယတြာလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်ကြည့်တာပါ၊ ဘာမှမှမသိတာ”လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ရွာထဲမှာရှိတဲ့ တချို့အိမ်တွေကလည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေ ရှိပေမယ့် တချို့က မလုပ်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
“ဟိုကတမျိုးပြော ဒီကတမျိုးပြောနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပေမယ့် အဓိက မကြောက်ဖို့ လိုတယ်၊ ကြောက်ရင် ဘာမှ လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မကြောက်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ခုထိတနိုင်ငံလုံးမှာ ဆေးမတွေ့ဘူးဆိုတော့ ယတြာပဲ အားကိုးရတာပေါ့”လို့ ဦးကျော်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာ အတွက် ယတြာ ကိုအားကိုးနေရတဲ့ ဒေသခံတွေ